The Voice Of Somaliland: Somalia : Taladaad Hore U Seegtay Maantana Ha Seegin
(Waridaad)-Marka hore waa wax shanta (5) Somaliyeed ku farxaan in Dalka Somalia xoog iyo xabbad looga saaro Cadowga Itoobiya oo shan boqol (500) oo sano dagaal cad ku hayay Diinta Islaamka ee Geeska Afrika kuna taamayay sidii uu u wada qabsan lahaa dhulka Somaliyeed. Guushaas weyn ee laga soo hooyay cadowga waxay u baahantahay talo iyo go`aan aad looga baaraandego si loo dhiso dawlad dhab ah oo matasha dadka iyo dalka Somalia una horseedda nabadgelyo iyo horumar lagaga badbaado dhibaato dambe.
Dadka qaar marka ay faaladan akhriyaan, waxaa laga yaabaa inay igu eedeeyaan inaan Somalida kala qaybinayo ama aqoonsi u doonayo Somaliland . Kuwaas waxaan leeyahay, Somalida gumaysi ayaa shan (5) meelood u kala qaybiyay qarnigii 19aad, Afrika oo dhanna kala qoqobay xuduudahana u sameeyay. Jabuuti waxay dooratay dawladnimo gaar ah oo diiday inay ku soo biirto Somalida xorta ah. Somaliland iyo Somalia waxay ahaayeen laba dal oo xoroobay 1960 dabadeedna kala noqday 1991 kadib markii dhibaatoweyni soo gaadhay dadka Somaliland haddana dhistay dawlad u gaar ah. Somali Galbeedka (Itoobiya) iyo Waqooyi Bariga ( Kenya ) weli waa la gumaystaa lamina oga waqtiga ay xoroobayaan. Markaas qofka ku doodaya waxbaa la kala qaybinayaa miyuu hayaa figrad iyo awood uu isugu keenayo maanta 5ta Somaliyeed? Jawaabtu waa maya. Waxay noqonlahayd xoog iyo sharaf u soo hoyata Somalida haddii la helilahaa dalweyne Somaliyeed oo ka kooban 5ta Somaliyeed kana dhasha Geeska Afrika laakiin maanta lama hayo. Somalidu waxay ku maahmaahdaa, “Miro gunti ku jira looma daadiyo miro geed saaran." Waxaan uga jeedaa Somaliyaay aayahaaga ka tasho oo hadimada iyo hoosaasinta diid.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Sunday, January 18, 2009